Uvule inkampani yokuzivocavoca osewole izindondo | Isolezwe
Uvule inkampani yokuzivocavoca osewole izindondo
intandokazi / 22 November 2018, 4:37pm / PHILI MJOLI
UNKZ Samkelo Xulu wePhoenix Health and Wellness ehlanganyele nabakwaCoca-Cola emkhankasweni wokusiza umphakathi ukuthi uzivocavoce ukuze uphile kahle Isithombe: Sithunyelwe
UKUKHULA kwakhe emsebenzini kumenze wacabanga ukuthi aziqalele elakhe ibhizinisi kunokuqoqa izindondo zokwenza kahle emsebenzini.
UNksz Samkelo ‘Sam’ Xulu (28) waseSeaview, eThekwini uthe ukuzuza kwakhe indondo yokuba iBest Fitness Manager, eKZN, eVirgin Active kumenze wazibona ukuthi ngempela unento enkulu angayenza.
Yize ebengazi ukuthi umcabango wakhe ungaba yibhizinisi kwazise ubazi ukuthi ayikho imali ongayithola ngokusiza abantu ukuthi bazivocavoce, baphile kahle.
Uthe ngo-2015 waqokwa wabayiBest Fitness Manager, eVirgin Active. Ngaleso sikhathi wayengumuntu omnyama omncane kunabo bonke abake bathola lesi sicoco kodwa akabange esahlala kulowo msebenzi ngoba esezibona enevuso lokuhlela imicimbi.
Ngaphambi kwaleso sicoco uthe ubeke waqokwa waba yiGroup Training Manager, eKZN kuyona le nkampani.
“Ngahlela imicimbi efana nama-baby shower, neminye futhi kwangihambela kahle, imali ibingena kodwa kunabantu ebebelokhu bengibiza ukuthi ngizokwenza izinkulumo mayelana nokuzigcina uphilile ngokuzivocavoca.
“Le misebenzi yangenza ngazikhumbula ukuthi lo msebenzi engiwenzayo ngangena kuwo ngenxa yemali, hhayi ngoba nginothando lwawo. Kancane kancane ngangena kulo wobizo. Ekugcineni ngazitshela ukuthi ngifuna ukuvezela izwe ukuthi into oyithandayo noma ngabe yini, ungayenza ibhizinisi futhi uyingenise imali. Njengamanje ngiwumsunguli wenkampani iPhoenix Health and Wellness,” kusho yena.
Le ntokazi ithi ikhule ithanda i-netball, ebiyidlala isasesikoleni samabanga aphezulu. Ukwenza kahle kuyo kuholele ekutheni iyokwenza izifundo zeSports Coaching, e-University of Johannesburg.
“Ngiwumuntu onesibindi futhi okwazi ukufaka umfutho kukho konke engikwenzayo, inqobo nje uma sengizitshelile ukuthi le nto kuzomele isebenze.
“Bekumnandi ukuba yimenenja ngithola nokuhlonishwa ngoba inkampani engiyisebenzelayo inegama kodwa mina ngakhetha ukuyoqala phansi ngivule inkampani engaziwa futhi kuwumkhakha engingawazi ngoba nje bengazi ukuthi nginekhono lokuhlela,” kusho yena.
Inkampani yakhe uthe ihlanganyela nezinye izinkampani ezifisa ukugqugquzela ukuthi abantu bazivocavoce.
Amanye amakhasimende akhe amakhulu uthi yizinkampani azilekelela ngokwenza izinhlelo zazo zokusiza umphakathi ukuthi uphile kahle.
Uke waba yingxenye yabalolonga umzimba beVipaji, eKwaMashu ngesikhathi begubha usuku lwabesifazane ngokubanika ulwazi ngamasu okuzilolonga umzimba, ngo-Agasti nonyaka.
NgoMgqibelo uzobe enomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bazivocavoce ngenhloso enhle yokuvikela ukuhlaselwa yisifo sikashukela eFountain Court, eSouth Beach.